Global Voices teny Malagasy » Ny Halafon’ny Fangejana ny Fitenenana ao Alzeria: Fiainana sy Fahafahana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2016 4:56 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Andriamifidisoa Zo
Tamin'ny 8 Desambra lasa teo no nampandriana hiala sasatra  [nalevina] tao an-drenivohitra Alger i Mohammad Tamalt, Alzeriana 42 taona sady mpampita vaovao no bilaogera. Nanomboka tsy nahatsiaro tena  i Tamalt tamin'ny faramparan'ny volana Aogositra teo rehefa nitokona tsy nihinan-kanina naharitra roa volana ho fanoherana ny fisamborana azy.
Tamin'ny 11 Jolay, nomelohin'ny  fitsarana tao Alger higadra roa taona sy handoa onitra 200.000 dinara alzeriana (tokony ho 1.800 dolara amerikana) noho ny fanevatevana an'i Bouteflika sy ny andrim-panjakana araka ny andinin-dalàna famaizana faha-144, faha-144 bis ary faha-146 i Tamalt. Nohamafisin'ny fitsarana ambony ny fanamelohana azy iray volana taty aoriana
Mety hiezaka hiala andraikitra amin'ny fahafatesan'i Tamalt ny manampahefana Alzeriana. Tao amin'ny fanambaràna iray ny sampan-draharaha misahana ny fonja ao amin'ny firenena no nilaza  fa nahazo fanarahamaso sy fanafody i Tamalt nandritra ny fotoana nanaovany fitokonana tsy hihinan-kanina, ary simba vetivety ny fahasalamany taorian'ny fahitana fitomboan'aretin'havokavoka  tsikaritra tamin'ny 4 desambra. Fa ny manampahefana Alzeriana no nanagadra sy nampangina an'i Tamalt tsy hiteny intsony noho ny fanaovana tsikera, hiarovana ilay filoha efa ratsy ny toe-pahasalamany, ary efa teo amin'ny fahefana hatramin'ny taona 1999.
Tamin'ity taona ity fotsiny dia efa maro ireo Alzeriana, na mpampita vaovao na bilaogera no nentina teny amin'ny fitsarana sy nogadraina noho ny fanehoan'izy ireo ny heviny an-tserasera. Tamin'ny farany volana mey izao i Belkacem Khencha, sendikalista sady mpikatroka no nomelohina higadra enim-bolana an-tranomaizina noho ny famoahana lahatsary  tao amin'ny Facebook namelaka tehamaina tamin'ny fanagadrana mpiara-miasa iray, raha nodidiana handoa onitra 100.000 dinara alzeriana (tokony ho 1000 dolara amerikana eo ho eo) noho ny famoahana sarim-panesoana  ny filoha tao amin'ny Facebook i Zoulikha Belarbi, mpikatroky ny zon'olombelona, tamin'ny volana marsa.
Tsy sasatry ny enjehina  ara-pitsarana noho ny fikatrohany amin'ny fandalàna ny zo sy noho ny asany amin'ny maha-mpampita vaovao azy i Bouras, izay mpikambana ihany koa ao amin'ny Ligy Alzeriana Mpandala ny Zon'Olombelona. Nosamborina tao an-tranony izy tamin'ny 2 Oktobra 2015 ary notazonina an-tranomaizina mihoatra ny telo volana noho ny “fandrisihana hanao herisetra sy hikomy amin'ny fanjakana” sy “fanivaivana ny andrim-panjakana.” Nohelohina hifonja roa volana izy tamin'ny taona 2008 noho ny fitaterany trangan-kolikoly, ary nohelohina higadra roa taona izy tamin'ny taona 2003 noho ny fanevatevana andrim-panjakana ary noraràna tsy hahazo mitati-baovao nandritra ny dimy taona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/28/93482/
 nampandriana hiala sasatra: http://www.reuters.com/article/us-algeria-media-idUSKBN1410ZI
 tsy nahatsiaro tena: https://globalvoices.org/2016/09/02/after-two-months-on-hunger-strike-jailed-algerian-journalist-enters-coma/
 ny enjehina: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/hassan-bouras-detained-and-sentenced-one-year-imprisonment